iOS ရဲ့ App Suggestion ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
8 Apr 2018 . 5:59 PM
iOS 10 မှာစတင်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ App Suggestion ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Feature တစ်ခုပါ။ သင့် iPhone ထဲမှာ ပါတဲ့ App တွေနဲ့ သင် Download ဆွဲထားတဲ့ App တွေ၊ Game တွေကို သင်အသုံးပြုလောက်မယ့်အချိန်မှာ ပြပေးဖို့အတွက် Apple ရဲ့ Software Feature လေးတစ်ခုပါ။
Siri App Suggestions လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်
App Suggestion အတွက် သင့်ဖုန်းရဲ့ Location အချက်အလက်နဲ့အတူ သင်အသုံးပြုတဲ့မှတ်တမ်းကို အသုံးပြုပြီး သင့်အတွက် App တွေကို Suggest လုပ်ပေးတာပါ။ သင်ဖွင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ App ကိုမှတ်သားတဲ့အချိန်မှာ တည်နေရာကိုပါတွဲဖက်မှတ်သားလေ့ရှိပါတယ်။ တည်နေရာအပြင် အသုံးပြုတဲ့ အချိန်တွေကိုလည်းမှတ်သားထားတာပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချက်အလက်အစုံကို နေ့စဉ်မှတ်သားထားပြီး သင့်အနေနဲ့ ဘယ် App ကိုဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြီး အကြံပြုချက်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Feature နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သံအချို့ထွက်လာပါသေးတယ်။ ဝေဖန်ချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ “iOS မှာ Spotlight Search ပါနေတာပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ App ကိုရှာပြီးချက်ချင်းဖွင့်လိုက်လည်းရနေတာပဲ” လို့ပြောကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းကတော့ Spotlight Search မှာမရှာခင်ကတည်းက အောက်မှာ Suggestion လုပ်ပေးတာတွေက ကွက်တိဖြစ်နေတာကများတာကြောင့် နောက်ပိုင်းတော့ ဝေဖန်တာတွေနည်းသွားတဲ့အပြင် အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလာကြပါတယ်။ iOS Version အသစ်ထွက်တိုင်း မြင်သာတဲ့ Design ပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုဆွဲဆောင်တာမျိုးထက် တစ်ကယ်အသုံးဝင်ပြီး အသေးစိတ်လွန်းတဲ့ Feature တွေကိုပဲထပ်ထည့်ပေးတာက Apple ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုပါ။ iOS User တွေအနေနဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုမရှိတာမျိုးကိုလက်ခံပေမယ့် Android User တွေရဲ့လှောင်ပြောင်ပြောဆိုခြင်းတွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလိုပြောခံရလေ့ရှိပါတယ်။ Mobile OS တွေအနေနဲ့တော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဝတူညီတာမျိုးတော့ ရှိလာမှာမဟုတ်တာကြောင့် နှစ်ခုကြားမှာ တူညီတာလေးတွေရှိတတ်သလို ကွဲပြားနေတာလေတွေလည်းအများကြီးပါ။
iOS ရဲ့ App Suggestion ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ?
iOS 10 မှာစတငျပါဝငျလာခဲ့တဲ့ App Suggestion ဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ Feature တဈခုပါ။ သငျ့ iPhone ထဲမှာ ပါတဲ့ App တှနေဲ့ သငျ Download ဆှဲထားတဲ့ App တှေ၊ Game တှကေို သငျအသုံးပွုလောကျမယျ့အခြိနျမှာ ပွပေးဖို့အတှကျ Apple ရဲ့ Software Feature လေးတဈခုပါ။
Siri App Suggestions လို့နာမညျပွောငျးလိုကျပါတယျ
App Suggestion အတှကျ သငျ့ဖုနျးရဲ့ Location အခကျြအလကျနဲ့အတူ သငျအသုံးပွုတဲ့မှတျတမျးကို အသုံးပွုပွီး သငျ့အတှကျ App တှကေို Suggest လုပျပေးတာပါ။ သငျဖှငျ့သုံးလရှေိ့တဲ့ App ကိုမှတျသားတဲ့အခြိနျမှာ တညျနရောကိုပါတှဲဖကျမှတျသားလရှေိ့ပါတယျ။ တညျနရောအပွငျ အသုံးပွုတဲ့ အခြိနျတှကေိုလညျးမှတျသားထားတာပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီလိုအခကျြအလကျအစုံကို နစေ့ဉျမှတျသားထားပွီး သငျ့အနနေဲ့ ဘယျ App ကိုဘယျနရော၊ ဘယျလိုအခြိနျမြိုးမှာ အသုံးပွုနိုငျတယျဆိုတာကိုခနျ့မှနျးခကျြထုတျပွီး အကွံပွုခကျြထုတျပေးတာပဲဖွဈပါတယျ။
အခု Feature နဲ့ပတျသကျပွီး ဝဖေနျသံအခြို့ထှကျလာပါသေးတယျ။ ဝဖေနျခကျြတှထေဲက တဈခုကတော့ “iOS မှာ Spotlight Search ပါနတောပဲ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ App ကိုရှာပွီးခကျြခငျြးဖှငျ့လိုကျလညျးရနတောပဲ” လို့ပွောကွပါတယျ။ တဈကယျတမျးကတော့ Spotlight Search မှာမရှာခငျကတညျးက အောကျမှာ Suggestion လုပျပေးတာတှကေ ကှကျတိဖွဈနတောကမြားတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးတော့ ဝဖေနျတာတှနေညျးသှားတဲ့အပွငျ အသုံးဝငျတယျဆိုတာကို လကျခံလာကွပါတယျ။ iOS Version အသဈထှကျတိုငျး မွငျသာတဲ့ Design ပွောငျးလဲမှုမြိုးတှနေဲ့ ပရိတျသတျကိုဆှဲဆောငျတာမြိုးထကျ တဈကယျအသုံးဝငျပွီး အသေးစိတျလှနျးတဲ့ Feature တှကေိုပဲထပျထညျ့ပေးတာက Apple ရဲ့လုပျရိုးလုပျစဉျတဈခုပါ။ iOS User တှအေနနေဲ့တော့ အဲ့လိုမြိုးပွောငျးလဲမှုမရှိတာမြိုးကိုလကျခံပမေယျ့ Android User တှရေဲ့လှောငျပွောငျပွောဆိုခွငျးတှကေိုလညျး မကွာခဏဆိုသလိုပွောခံရလရှေိ့ပါတယျ။ Mobile OS တှအေနနေဲ့တော့ တဈခုနဲ့တဈခုလုံးဝတူညီတာမြိုးတော့ ရှိလာမှာမဟုတျတာကွောငျ့ နှဈခုကွားမှာ တူညီတာလေးတှရှေိတတျသလို ကှဲပွားနတောလတှေလေညျးအမြားကွီးပါ။